Andrew Mitchell oo jooga Garowe - BBC News Somali
Andrew Mitchell oo jooga Garowe
30 Jannaayo 2012
Image caption Andrew Mitchell, wuxuu tegey Garowe iyo Doolow
Xoghayaha Kaalmada Caalmiga ah ee Britain, Andrew Mitchell, ayaa booqasho ku tegey magaalada Garowe, ee gobolka Nugaal.
Wuxuu halkaa wadahadal kula yeeshay madaxda maamul goboleedka Puntland oo isugu jira Wasiirro iyo waliba Salaaddiin.
Waxay halkaa wadahadal ku yeesheen Madaxweyne ku xigeenka, Cabdisamad Cali-Shire, waxayna isla soo qaadeen arrimo dhowr ah oo uu ka mid yahay shirka ka dhici doono London bisha February oo ku saabsan Soomaaliya, sida uu BBC u sheegay af hayeenka Madaxtooyada Puntland, Axmed Cumar.
Shirkaa waxaa marti gelineysa Dowladda Britain waxaana lagu wadaa in ay ka soo qeyb galaan wufuud ka socota in ka badan 40 dowladood.
Andrew Mitchell oo ah xubin ka tirsan golaha Xukuumadda Britain, wuxuu shalay booqday Dowlow halkaa oo uu indhihiisa ku soo arkay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka bara kacay ee ay saameeyeen abaarta iyo colaadda Soomaaliya.
Britain waxay qaban qaabo xoog leh ugu jirtaa u diyaar garowga shirka, oo la damacsan yahay in ugu yaraan lagu mideeyo dadaalka caalamiga ah ee ku wajahan wax ka qabashada mushkiladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Maamul goboleedka Puntland, Cabdiraxman Shiikh, isagu dalka wuu ka maqan yahay.